A cameo na-eme nnukwu ogbo
Na ngwá ụlọ ma ọ bụ mmepụta nke ụlọ, ngwa mgbakwunye ngwaike na-akwụ ụgwọ naanị 5% -10%. Ma nguzo ma ọ bụ ọdịda nke àgwà nke a na ngwá ụlọ ma ọ bụ oche, ihe kasị kensinammuo mmetụta bụ ire ụtọ nke drawer slide, kabinet ụzọ mgba ọkụ na ma jụụ, onye ọ bụla ọrụ ibe ma mmadụ n ...
Kedu otu esi ahọrọ ihe ngosi zoro ezo zoro ezo?
site ha na 20-10-16
Fọdụ ndị ahịa jụrụ m otu esi ahọrọ akara ngosi dramo dị mma? Taa, m ga - ewebata ụdị ihe eji egwu drawer anyị nwere. Geriss ngwaike nwere ụfọdụ dị iche iche nke zoro ezo drawer. Maka nkọwa ị nwere ike ịga na https: //www.yangli-sh.co ...
Jeriko Ugboro abụọ mgbidi ebughibu igbe drawer usoro, ka ị na elu nkà na kichin!
Site na mmepe nke oge ahụ, ndị mmadụ nwere ihe dị elu ma dị elu maka kichin kichin. A set nke ezigbo kichin kabinet, ngwaike bụ oké mkpa akụkụ. GERISS HARDWARE bụ ọkachamara ọkachamara na China nke na-arụ ọrụ kichin kichin. Taa, anyị ga-ekwu maka ihe mere i ji kpọọ ...
Mịnịstrị na-ahụ maka gburugburu ebe obibi mejupụtara iwu ọhụụ gbasara ụkpụrụ gburugburu ebe obibi maka arịa ụlọ
Na Febụwarị 1, Mịnịstrị na-ahụ maka nchekwa gburugburu ebe obibi wepụtara "ihe ndị teknuzu nke ngwaahịa ịkọ ngwaahịa gburugburu ebe obibi (HJ 2547-2016)" na-arụ ọrụ nke ọma, yana "ngwa ọrụ teknụzụ chọrọ maka ngwaahịa ịdebanye aha gburugburu ebe obibi" (HJ / T 303-2006 ...
Olee otú Họrọ Good Ball Iburu Igbe Slide
N'oge na-adịbeghị anya, ụfọdụ ndị enyi ụlọ mma, gwara m ka m zụrụ ngwá ụlọ sliders ntị ka akụkụ ndị ahụ. Ugbu a, m na-akọrọ gị ahụmahụ m: nhọrọ nke bọl na-ebu slide nwere ike ịbụ site na nyocha ndị a iji họrọ ọwa igwe telescopic kacha mma: 1. ...
Igbe Draịvụ Dị Iche Mountdị Kpebie ma ịchọrọ n'akụkụ-elu, ugwu dị n'etiti ma ọ bụ ihe ngosi slmo. Onu ogugu di n’etiti igbe drawer gi na imeghe kabinet ga emetuta mkpebi gi. A na-ere slides n'akụkụ-ya abụọ abụọ ma ọ bụ setịpụrụ, ya na slide na-agbakwunye n'akụkụ drawer ọ bụla. Dị ...